Global Voices teny Malagasy » Fifandonan-Kevitry ny Hetsika #RespectMyVote (Hajao Ny Safidiko) Sy Ny ‘Bangkok Shutdown’ (Fanakatonana an’i Bangkok) Ao Thailand · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Janoary 2014 17:05 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Tantsaha Thailandey mitondra soratra ‘Respect My Vote’ (hajao ny safidiko) maka sary miaraka amin'ny sainam-pirenena thailandey. Saripikan'i Matthew Richards, Copyright @Demotix (1/15/2014)
Tokony hanohana sy handray anjara amin'ny fifidianana amin'ny 2 febroary ireo tezitra manohitra ny kolikoly fa tsy hanosika mankany amin'ny fananganana Vaomieram-Bahoaka tsy voafidy.
Izany no hafatra avy amin'ny vondrona sivika sy olon-tsotra izay nanao hetsika fandrehetana labozia izay any avaratr'i Thailand ny ankamaroany ho fanoherana ny hetsika fanentanana ‘Bangkok Shutdown’  [fanakatonana an'i Bangkok]. Mampiasa ny diezy Twitter #RespectMyVote  ry zareo.
Ny kendren'ny  mpanao fihetsiketsehana voalohany ao Bangkok dia ny hanongana ny Praiminisitra Yingluck Shinawatra izay ampangaina ho saribakolin'ny zokilahiny, ny praiminisitra teo aloha Thaksin Shinawatra. Tafala tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana 2006 moa i Thaksin saingy mbola nandresy ihany ny antokony tamin'ny fifidianana. Lasa sesintany izy rehefa nomelohan'ny fitsarana ao an-toerana ho nanodikodim-bola.
Nanafoana ny parlemanta i Yingluck mba ho famahana ny krizy politika. Misy fifidianana kasaina hotontosaina amin'ny volana ho avy io saingy nilaza ny ao amin'ny fanoherana fa hanao ankivy ny fombam-pifidianana ‘voakolikoly’. Nihamafy ny Hetsi-panoherana tao anatin'ny andro vitsivitsy saingy tsy nahovoka tamin'ny tsy fanetsehana tanteraka an'i Bangkok sy ny faritra hafa ao amin'ny firenena ny ao amin'ny fanoherana. Nahavita nibodo ny fihaonan-dalana lehibe fito ao Bangkok ny mpanao fihetsiketsehana:
Tonga amin'ny andro fahadimy amin'ny #BangkokShutdown  isika izao, na dia lasa tahaka ny Fibodoana ny kihon-dalana 7 ao #Bangkok  sy ireo lalana sasantsasany ho an'ny mpandeha an-tongotra
Noho ny fitsipahan-dry zareo ny fifidianana, dia voatsikera ho manao hetsika ‘anti-demokratika’ ny mpanao fihetsiketsehana ao Bangkok. Nipongatra avy amin'ny maro ny diezy #RespectMyVote (HajaoNySafidiko)tao anatin'ny andro vitsivitsy handrisihana ny mpanao fihetsiketsehana hiady ho amin'ny fiovana amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny volana ho avy.
Hamoaka ny loniloniko ao amin'ny fifidianana ho avy. Izany farafaharatsiny no fomba tsara indrindra azo atao ao anatin'ny fampanajana ny lalàna. #respectmyvote 
Izaho sy ny vadiko ao anatin'ny fandrehetan-dabozia ho amin'ny fandriampahalemana ao benjasiri #respectmyvote  #nofacism 
Lavitry ny #BkkShutDown  sy ny fifantohan'ny fampitam-baovao, fihaonan'ny mpanohana ny fifidianana #RespectMyVote  any Kalasin (Isan)
Hajao ny safidiko
Eny misy olona maro any Bangkok, ary mankaleo ihany ny sioka raha marina amin'ny tenantsika isika. Ahoana kosa raha mitodika kely any amin'ireo mpandala ny #RespectMyVote 
Amin'ny sary ianareo mahita olona mankany amin'ny #BKKShutdown . Saingy misy olona maro manohitra azy! #RespectMyVote  #PheuThai 
Nisy mpanakorontana iray aza nahavita nandefa mivantana ny hafatra  #RespectMyVote tany amin'ny praiminisitra teo aloha sady mpitarika ny mpanohitra Abhisit Vejjajiva.
Mandritra izany fotoana izany i Fuadi Pitsuwan miampanga  ny ‘didiko fe-lehiben'ny fanehoan-kevitra manerantany’ ary miaro ny fihetsiketseham-panoheran'ny ‘Fanakatonana an'i Bangkok’:
Tokony haka fotoana betsaka kokoa ireo mpaneho hevitra manerantany ireo mamakafaka hoe fa maninona no misy olona 500.000-1 tapitrisa – izay mpanaiky ihany sy tsy liana politika ny maro amin'izy ireo nidina an-dalambe ary mitaky ny fialan'ny fitondrana Thaksin. Tsy maintsy misy antony lehibe no mahatonga ny fitroarana hanohitra ny governemanta voafidy. Na ny habeny fotsiny aza dia efa zavatra tsy mbola nisy mihitsy tamin'ny tantaram-politika thailandey
Nandritra ny tafatafa nalefa mivantana nandritra ny fotoana no nanazavan'ny  mpitarika ny fihetsiketsehana ny Dr Seriny antony tsy hanohanany ny fifidianana ho avy:
Lalana iray ao amin'ny demokrasia ihany ny fifidianana, fa tsy io akory no demokrasia. Ny nahavoafidy anao tsy midika fa lasa ara-dalana sy nekena ho ara-drariny ny kolikoly nataonao. Fa na dia voafidy aza ianao ary manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna, raha mandika ny lalàna ianao dia mandika ny lalampanorenana, tsy maintsy manongana anao izahay.
Saingy mieritreritra  i Ryan Zander fa hiteraka olana bebe kokoa ho an'ny mpanohitra io Vaomieram-Bahoaka natsangana io:
Ahoana moa no anambaran'ny vaomiera tahaka itony ny fahefany? Moa ve tsy misy dikany iray tapitrisa avo heny kokoa ny miezaka mahazo ny maro an'isan'ny toerana amin'ny fifidianana vaovao mba ahafahan'ny any aminareo milaza fa ianareo no misolotena ny faniriam-bahoaka?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/18/56978/